कसैले दारा किट्दैमा,सडकमा आउदैम ओलि सरकार ढल्दैन:गोकुल बाँस्कोटा – Namaste Dainik
June 12, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कसैले दारा किट्दैमा,सडकमा आउदैम ओलि सरकार ढल्दैन:गोकुल बाँस्कोटा
कास्की खबर: सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद गोकुल बाँस्कोटाले केपी शर्मा ओलीको काम संग जल्नेहरु अहिले यो सरकार ढाल्न खोज्ने योजना बुनेका छन् तर दारा किट्दैमा र सडकमा आउंदैमा यो सरकार ढल्दैन भन्दै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानीका क्रममा गोकुल बाँस्कोटाले भने,“केपी शर्मा ओलीको सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा राम्रो काम गरिरहेको छ । सोचे जस्तो सबै तिर काम नभएको होला तर यो सरकारको कारणले मात्र होईन, स्वास्थ्य छेत्रको अवस्था पहिलाका सरकारले कुन हालमा छोडेको थियो त्यो सुधार्दै कोरोना नियन्त्रणमा सरकार लागेको छ । अहिले कोरोनाको विषय लिएर दारा किट्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेर हुन्छ ! आफूले मन्त्री हुँदा के गरेको थियौं भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ आरोप मात्र लाएर हुँदैन । सरकारले गरेको राम्रो काम नदेख्ने खालि सानो सानो कुरामा औंला उठाएर राजिनामा माग्ने?
१० अर्बको खर्च बारे अहिले चर्चा चलिरहेको छ र यस बारे नेता बाँस्कोटाले भने, १० अर्बको खर्च प्रधानमन्त्रीसंग माग्नु भन्दा गएर स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर मागे हुन्छ नि । १० अर्बको हिसाब लुकाएको हो र यत्रो हल्ला गर्ने । हिसाब हेर्नुहोस न प्रक्रिया अनुसार सरकारले देखाइरहेको छ त । १० अर्बमा भ्रष्टाचार गर्यो भन्दै सत्ता चाहिएको हो कांग्रेसलाई ? अब कुरुम न ३ वर्ष अनि जनताले भन्ने छ त्यो बेला सत्ता कसलाई दिने भनेर । अनावश्यक भिंडको राजनीति गर्न छोडे हुन्छ ।
भारतीय राजदूतलाई आफूले भेटेको समेत नेता बाँस्कोटाले उल्लेख गरेका छन् । “म पूर्व मन्त्री र सांसद हुँ र म संग भारतीय राजदूतले भेट्न खोजे तर यो कुरालाई अतिरञ्जनाको विषय बनाईयो जुन अचम्म लाग्छ । कहिले भारतीय राजदूतसंग भेटिएला कहिले चीनको सित भेटिएला तर यस कुरालाई अतिरञ्जनाको विषय बनाईयो । नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको छिमेकी जस्तो नै छ जहाँ कहिले काहिँ तल माथि हुन्छ तर फेर्न सकिन्न ।
हामीले हाम्रो छिमेकी फेर्न सक्दैनौ त्यसैले सकेसम्म भएका गुनासोहरुलाई मिलाएर सुल्झाएर बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल र भारत दुवैले आपसी हित कै लागि चाहेको छौं र मेरो भेट पनि यसैको लागि हो । त्यो सामान्य अनौपचारिक भेट थियो र त्यस्तै कुराहरु भएको हो । म कुनै प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर गयो भन्ने जस्तो हल्ला भए जस्तो गएको होईन ।कास्की खबर